Izizathu ze-6 zokusetha kwakhona iBhlog yakho yeWordPress | Martech Zone
Izizathu ze6 zokusetha kwakhona iBhlog yakho yeWordPress
NgoLwesihlanu, Julayi 19, 2019 NgoLwesihlanu, Julayi 19, 2019 Bryan
WP Cwangcisa kwakhona yiplagi ekuvumela ukuba usete indawo yakho ngokupheleleyo kwaye ngokuyinxenye apho kuphela icandelo elithile lebhlog yakho lifakiwe kutshintsho. Ukuseta ngokupheleleyo kuyazicacisa, kususa zonke iiposti, amaphepha, iintlobo zeposti, amagqabantshintshi, imithombo yeendaba kunye nabasebenzisi.
Isenzo sishiya iifayile zemithombo yeendaba (kodwa asizidwelisi phantsi kwemithombo yeendaba), kunye nokudityaniswa okunje ngee-plugins kunye nokulayishwa kwemixholo, kunye nazo zonke iimpawu eziphambili zesiza-isihloko sesihloko, idilesi yeWordPress, idilesi yendawo, ulwimi lwesiza , kunye noseto lokubonakala.
Ukuba ukhetha ukuseta ngokutsha, nolu khetho lwakho:
Amaxeshana -Idatha yonke yethutyana iyacinywa (ibandakanya ukuphelelwa lixesha, ukungaphelelwa lixesha kunye nokungeniswa kweenkedama okwethutyana)
Ngenisa idatha -Zonke iifayile ezifakiweyo kwi-C: \_ ifolda \_ htdocs \_ wp \_ wp-umxholo \_ ulayisho luyacinywa
Izinketho zomxholo -Susa ukhetho kunye neemodyu kuyo yonke imixholo, esebenzayo nengasebenziyo
Ukucinywa komxholo -Isusa yonke imixholo, ishiya kuphela umxholo we-WordPress okhoyo
plugins - Zonke iiplagi ngaphandle kweWP reset ziyacinywa
Iitafile zesiko - Zonke iitafile zesiko ezinesimaphambili se-wp_ ziyacinywa, kodwa zonke iitafile eziphambili kunye nezo zingena-wp_ isimaphambili zihlala
htaccess ifayile -Isusa ifayile ye-.htaccess ebekwe kwi-C: / ifolda / ihtdocs / wp / .htaccess
Kubaluleke kakhulu ukubonisa ukuba zonke izenzo zigqityiwe kwaye zingenakuguqulwa, nokuba uhamba ngaphi na, ke qiniseka ngaphambi kokucofa eli qhosha.
Kwimeko apho uzibuza ukuba yeyiphi imeko enokufuna ibhlog / ukuseta kwakhona indawo, ungakhathazeki. Siye saqulunqa uluhlu lwezona zizathu zixhaphakileyo ezinokuthi zenze esi senzo. Ngaphandle kokuqhubeka, jonga ukuba ngaba ibhlog yakho isemngciphekweni wokuphinda usethwe kwakhona:
Esinye sezizathu zokuqala eziza engqondweni xa ucinga ngokusetha kwakhona ibhlog kuxa usuka kwindawo yasekhaya / yabucala esiya eluntwini. Xa uqala kwicandelo lophuhliso lwewebhu, okanye ibhlog yakho ephethe ukubheja kwakho okuhle kukuqala ngento apho kungekho monakalo unokubakho. Nokuba yindawo yendawo okanye eyimfihlo ayinamsebenzi, into ebalulekileyo kukuzama yonke into onokuyenza kwaye ubone ukuba isebenza njani yonke into - iiplagi, izikripthi, imixholo, njl.njl. Lixesha lokuba wenze utshintsho kwisivumelwano sokwenyani rhoqo kunokuba ungafuni ukwenza njalo kwiphepha elicocekileyo.
ukusukela qalisa kwaye wenza uvavanyo olubanzi, ekungqengqeleni ukufunda njengoko uqhubeka, kuyakubakho iqela lezinto eziphikisanayo ebhodini. Amathuba kukuba, le micimbi iyakube isinzulu kwisiseko sokuba eyona ndlela ilula yokuqalisa ngokutsha kukuyibuyisela ekungqiba. Ngolwazi lwakho olutsha, uya kuba nakho ukuqala ucocekile ukunqanda zonke iimpazamo ezize ngaphambili.
Ukulandela kunye nebhlog yokufunda / yokuvavanya, kukho iimeko apho uninzi lweengxaki ezifanayo ezinokuthi zivele kwiiblogi esele ziphila. Oku kunokuba yinyani ngakumbi kwimeko apho isiza sele sikhona ixesha elide kwaye, ngelo xesha, sinikezele ngesixa esikhulu semixholo eyahlukeneyo. Umgaqo wesithupha kukuba umxholo ongaphezulu owunikezelayo, ngakumbi isoftware engaphantsi kuyakufuneka uyixhase yonke.
Ubamba ivenkile yewebhu, Udinga iplagi ukuyiqhuba, ufuna ubhaliso ukujonga ezinye okanye zonke iziqulatho zakho, ufuna iplagi, unamacandelo ahlukeneyo anemixholo eyahluke ngokupheleleyo kumaphepha ahlukeneyo, ufuna imixholo yesiko emininzi ukwahlula phakathi kwabo. Uluhlu luqhubeka nje kwaye luqhubeke.
Ngokuqinisekileyo unokongeza nje ukudityaniswa njengoko ubadinga, ungakhathazeki kangako malunga nokuseleyo kwaye kungangqubana nezinto ezintsha oziphumezayo. Ukugcina izisombululo ezahlukeneyo, nokuba kungokudityanisiweyo kweeplagi, okanye iinkonzo zangaphandle ngaphezulu komnye nomnye, ngokuhamba kwexesha kunakho kwaye mhlawumbi kuyakubakho isiphithiphithi.
Okokuqala kuwe ngasemva kwaye okokugqibela kubatyeleli bakho ngaphambili. Ukuba, enyanisweni, iza kuloo nto, sele ihambile ixesha kuyo nantoni na ngaphandle kokusetha ngokupheleleyo. Kwakhona, isisombululo ngasinye sinokufakwa, kodwa kubaluleke ngakumbi apha ukwenza umsebenzi ngokukhawuleza kuba indawo ivulelekile eluntwini. Kuba uninzi lweesayithi kunye neeblogs kule mihla, ubuncinci, ezinye zeendlela ezisisiseko zokugcina, emva kokusetha kwakhona uya kuba nakho ukubetha umhlaba usebenze ngokukhawuleza.
Utshintsho kwicala lomxholo
Eyona nto ibalulekileyo utshintsho kumxholo okanye kwifomathi inokuba sesona sizathu sokuba ufuna ukuseta kwakhona ibhlog yakho. Njengoko uguquka, injalo nebhlog yakho kunye nomxholo owukhuphelayo. Ngethuba nje kukho umtya oqhelekileyo kuyo yonke into onokuqhubeka uqhubela phambili, kodwa xa ujiko olubukhali lusenokwenzeka olungenakwenzeka.
Mhlawumbi ufuna ukushukumisa izinto phezulu, mhlawumbi umxholo owukhuphelayo ngala maxesha abhalwe kuwo (kulandela iphulo lemveliso entsha umzekelo) kwaye ayisebenzi ngoku. Nokuba siyintoni na isizathu sotshintsho sinokuthi sifike apho ukubambelela kumxholo ongawufuniyo kulilize kwaye ukuqala ngokutsha kuyafuneka.
Oko ukuseta indawo yakho kwakhona kuyisusa ngokupheleleyo indawo yogcino oluzipapasheyo (zonke izithuba kunye namaphepha) kunye nokuba yeyokugqibela kwaye ingenakuguqulwa kufuneka ucinge nzulu ngaphambi kokuya kule ndlela. Izizathu ezibini ezidlulileyo esizikhankanyileyo zisekwe kubuchwephesha kunayo nayiphi na into (isoftware ichaneke ngakumbi). Le, nangona kunjalo, ingumbandela wokuzikhethela kunesidingo kwaye ke ifuna isicwangciso esichanekileyo sexesha elifutshane kunye nexesha elide lebhlog, ke kwakhona -cinga nzulu kwaye ucinge kabini ngaphambi kokwenza.
Ukucima ibhlog yakho
Ngokuhambelana nesizathu esisekwe kumxholo ngaphambili, le ilandela uloliwe ofanayo wengcinga. Ukucima ibhlog yakho ngaso nasiphi na isizathu kufuneka sikhatshwe zizenzo ezithile ukukhusela nakuphi na ukusetyenziswa gwenxa. Khawufane ucinge xa ​​unokuthile okwenziwe iminyaka emva kokuba ibhlog yakho ifile kwaye isetyenziswe ngendlela ongakhange ucwangcise ngayo kodwa iyingozi. Ukuthintela iimeko ezinje, licebo elilungileyo lokusula isileyiti ngaphambi kokuya ngaphandle kokungaxhunyiwe kwi-intanethi.
Ngoku, sonke siyazi ukuba nantoni na ebonakala kwiwebhu ihlala apho ngonaphakade kwifomu enye okanye enye, kodwa akufuneki usebenze umxholo wakho kwisitya sesilivere. Ukusetha kwakhona iblogi yakho kuthetha ukuba ugcino olupheleleyo lomxholo wakho wokuqala olayishwe ngeposi kunye namaphepha ayacinywa. Oko kuthetha ukuba ngaphandle kokuba umntu othile awugcine ekuhlaleni umxholo xa wawupapashwe kwasekuqaleni kuya kuba nzima ukufika kuwo.
Njengoko besitshilo ukuba ukususa into kwi-intanethi akunakwenzeka, kodwa ngezenzo ezimbalwa nje, ukuseta kwakhona ukuba ube ngowokuqala phakathi kwabo niyazikhusela kunye nepropathi yakho yobukrelekrele. Ukongeza koku, awuzukuyicima ngokupheleleyo ibhlog yakho, endaweni yokuyibeka kwindawo yethutyana okanye esisigxina onokuphinda ubuye kuyo kwixesha elizayo. Awuyi kuba nakho ukuqhubeka ukusuka apho ubuyeke khona, kodwa kuya kubakho isiseko esomeleleyo oza kusebenza kuso.
Kude kube ngoku zonke izizathu beziphume lula, izigqibo zeshishini, okanye uxolo lwengqondo. Ngelishwa kukho izizathu ezinganqwenelekiyo zokufuna ukuseta indawo kwakhona. Qaphela ukuba sisebenzise igama elithi "ukufuna" hayi "ukufuna". Ukuba kuye kwakho ulwaphulo kukhuseleko kunye nendawo yakho kunye nomxholo oqulethweyo usemngciphekweni ngokwenene "uyayidinga" ukuthatha amanyathelo afanelekileyo. Ukutshintsha, ukuhlaziya kunye nokuhlaziya eyakho useto lokhuseleko ngokuqinisekileyo yinto yokuqala ekufuneka uyijongile, kodwa ayisiyiyo kuphela kwento.
Sele sichazile ukuba uninzi lwamaxesha kukho iindlela zokuxhasa nkqu nababoneleli besizinda abasisiseko, ke ukuseta ngokutsha ngokupheleleyo ayisiyonto ekufuneka usoyike. Ngokwenza oko uzikhusela wena kunye nebhlog yakho kunye nomxholo kwisoyikiso esele senzekile kunye nazo naziphi na izoyikiso ezinokwenzeka.
Kubonakala ngathi siya sisuka kokubi sisiya kokubi, kodwa zonke ezi zizathu onokuthi uhlangane nazo ezinokuthi zikuncede uphumle indawo yakho. Njengokophula umthetho wezokhuseleko, xa ujongene nayo nayiphi na inyathelo lezomthetho (eligcina ngendlela, hayi kuphela kwinkqubo) akukho nto ingako ungayenzayo kodwa uyithobele emva kokuba zonke ezinye izixhobo ziphelile.
Nokuba yeyiphi na iodolo oyinikile, ikakhulu malunga nokuvala ibhlog yakho / indawo, kububulumko ukwenza useto olupheleleyo ngaphambi kokuba uthobele. Sele sigubungele ukuba kutheni le nto ibalulekile kwaye inokusetyenziswa ngendlela ongayifuniyo ukuba awuzithathi zonke izilumkiso ngezi ntlobo zezinto ezibuthathaka.
Umgca wentshukumo ochanekileyo kwezi meko iya kuba kukuseta kwakhona-ukuya ngaphandle kweintanethi. Ukuhlala kule nto ubuncinci unokuyihlangula kwimo esele ikho kwaye ungayenzi ibe mbi ngakumbi kunangaphambili.
Kwaye unayo. Izizathu ezintandathu eziphezulu zokuba kutheni ungafuna ukuseta indawo yakho kwakhona, ngokupheleleyo, okanye ngokuyinxenye. Ukuba uzifumene ukwenye yezi meko zichazwe ngasentla mhlawumbi lixesha lokuba uqwalasele isenzo esinjengale, nokuba kunokubonakala ngathi sinzima. Ngamanye amaxesha amanyathelo anje ngala kuphela ashiyekileyo.
tags: setha kwakhona i-wordpressWordPressiplagi yamagama
UBryan Mixon ungumnini AmazeLaw, isakhiwo sewebhusayithi sedwa kunye namagqwetha amancinci. U-Byran ebesakha iiwebhusayithi ukusukela ngo-1999 kwaye uchithe iminyaka emine edlulileyo enceda iinkampani ezinjengeHubSpot, iMill33 kunye ne-LivingSocial. UBryan uyazibonela ngokwakhe ukuba kunokuba nzima kangakanani kubanini bamashishini abancinci ukufumana urhwebo lwedijithali emhlabeni, ke wakha i-AmazeLaw njengendawo elula kakhulu yamagqwetha awodwa okwakha iziza zawo, ukuqokelela izikhokelo kunye nokuqhubeka neentsuku zawo ukwenza izinto zobugqwetha.
Kutheni unxibelelwano lweQela lubaluleke ngakumbi kuneMartech Stack yakho